Pfingo — MYSTERY ZILLION
September 2011 edited September 2011 in Tech News
How to use pfingo and where can i buy pfingo account and card in Yangon?
Zenovia မှာ စုံစမ်းကြည့်ပါ... ၁၉ ၅၅၀ ၁၉၄၁ ၊ ဘယ်လိုသုံးရတာလဲဆိုတော့ဗျာ ဆော့ဝဲကိုဒေါင်းပြီး အင်စတောလုပ်၊ ပုဂံကွန်နက်ရှင်ဆို ပရောက်ဆီ မလိုဘူး... အမ်ပီတီဆို ygncache.mpt.net.mm / port 8080 ထည့်ပေးလိုက်ယုံပဲ.. ပြီးရင် အကောင့်ကို ဝင်၊ သုံးယုံပဲ..
I called the Zenovia but they tell me that they don't give any service for pfingo.
Thz for the information ... Mr. Thiha
btw .... can i use with c800 internet connection for pfingo .... ?
i wanna use pfingo ...... help me plz!
ဘာကွန်နက်ရှင် နဲ့ မဆို လိုင်းကောင်းရင်ရပါတယ်.. ဆိပ်ကမ်းသာအလယ်လမ်းမှာ Forword DV မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်.. ဖုန်းထဲမှာပဲ ထည့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဆော့ဝဲလ်လိုပါမယ်..
http://www.androidzoom.com/android_applications/social/pfingotalk_oada.html မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်..
With less than 10KBps???? coz the 3G conn is now less than that